विश्वकप क्रिकेट : भारत हार्दा पाकिस्तानी समर्थकलाई झड्का, भारतले जानीजानी हारेको आरोप | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विश्वकप क्रिकेट : भारत हार्दा पाकिस्तानी समर्थकलाई झड्का, भारतले जानीजानी हारेको आरोप
असार १६, २०७६ सोमबार ६:४८:३७ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डौ - आईसीसी विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा भारत इंग्ल्याण्डसँग हारेसँगै पाकिस्तानको सेमी फाइनल पुग्ने संभावना न्यून बनेको छ ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा पाकिस्तानका समर्थकहरुले भारतको जित होस् भन्ने कामना गर्नुका साथै इग्ल्याण्ड हारेको हेर्न चाहेका थिए । तर भारत पराजित भएसँगै पाकिस्तानी समर्थकलाई झड्का लाग्न पुगेको छ ।
भारत हारेसँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले प्रतिकृयाहरु आएको छ । शतककाे पारी खेलेका रोहित शर्माको प्रशंसा भइरहेको छ भने धोनी जानिबुझि कमजोर खेलेको भन्दै आक्रोस पोखिएको छ ।
खेल सकिएसँगै पाकिस्तानी समर्थकले पाकिस्तानलाई सेमी फाइनलमा पुग्न रोक्नका लागि भारतले जानिबुझी म्याच हारेको आरोप लगाईरहेका छन् ।
ट्विटर प्रयोगकर्ता अली कामराजीले यो हारको पछाडीको कारण के हो भन्ने बारे सबैले राम्रोसँग जानेको बताएका छन् । साथै टिम र आफ्नो देशको लागि के सही हो भन्ने बारे धोनी राम्रोसँग जानकार रहेको पनि उनी बताउँछन् ।
Sorry Indian people's !! Dhoni knows what's right for his team and country.Just thinking 🤔 We all knows the biggest reason behind the lose.🤨#TeamIndia #indiavsEngland #IndVsEngland #CWC19 pic.twitter.com/LDYrKEiuz8
यस्तै भारतमा पनि म्याचपछि धोनी, रोहित, हार्दिकलाई ह्यासट्याग गर्दै ट्वीटर भरिएको थियो । खेलप्रेमीहरुले भारत, इग्ल्याण्ड र पाकिस्तानलाई जाेडेर मजाक गरिरहेका छन् ।
स्वरुपानन्द बेनर्जी लेख्छन्, ‘इतिहासमा पहिलोपटक भारत हार्दा पाकिस्तानी समर्थक टीवी फुटाइरहेका छन् ।’
This is the First time in the cricket History that. Pakistani will Break their Television after India's Defeat 😂😂😂#INDvENG pic.twitter.com/btxXa1FhJe
इंग्ल्याण्डले जितेसँगै पाकिस्ताका लागि विश्वकपको यात्रा कठीन बनेको छ । भारत र इंग्ल्याण्डकाे म्याचअघि पाकिस्तान ९ अंकका साथ इंग्ल्याण्डभन्दा अगाडि थियो । यो जितसँगै इग्ल्याण्डको १० अंक भएको छ । उसले अझै एक गेम खेल्न बाँकी नै छ ।
पाकिस्तानले पनि एक गेम खेल्न बाँकी छ । प्रतियोगितामा रहन पाकिस्तानका लागि यो खेल जित्नै पर्ने दबाब छ ।
तर इंग्ल्याण्डले अब बाँकी रहेको खेल हार्‍याे भने मात्रै पाकिस्तानका लागि विश्वकपको ढोका खुल्ने छ । होइन भने पाकिस्तानले अब खेल्ने खेल जिते पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु पर्ने छ ।